ငွေစန္ဒာ: ပုဇွန်ချဉ် လုပ်ကြည့်ရအောင်
NAM POWDER (နမ်အမှုန့်)
Posted by ငွေစန္ဒာ at 8:18 PM
baby taster December 2, 2010 at 9:17 PM
ကျမတော့ တခါတခါ ဗီယက်နမ်
မမလေး..ကျေးဇူးပြုပြီး.ကျွန်တော်တို့သိအောင်ပြောပြပေးပါလား နောက်ပြီး NAM POWDERဆိုတာကရောအချဉ်မှုန့်လား.အရသာကဘာအရသာလဲ ...
မြူးမြူး December 2, 2010 at 9:21 PM
ပုဇွန်ချဉ်အရမ်းကြိုက်တယ်.. ဒီတခါ ယိုးဒယားဈေးသွားမှ အဲဒီအမှုန့်လေးဝယ်ပြီး စမ်းကြည့်ဦးမယ်.. ကျေးဇူးနော်.. :)
rose December 3, 2010 at 5:48 AM
မမငွေစန္ဒာ... ပုဇွန်ချဉ် လုပ်နည်းလေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အမှုန့်ထုတ်ကို ထိုင်းဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ရမယ် ထင်တယ်နော်။ ရို့စ် ဘလော့ဂ်ကို အလည်ရောက်လာတာ ကျေးဇူးပါ။ ပြန်လာလည်ပြီး စာတွေ ဖတ်သွားတယ်။ ပို့စ်အသစ်တွေလည်း မျှော်နေတယ်နော်။
ငွေစန္ဒာ December 3, 2010 at 12:58 PM
Sunny December 3, 2010 at 1:06 PM
ပုစွန်ချဉ်လုပ်နည်းလေး လာဖတ်ရင်း လင့်လေး ယူသွားတယ်နော်.. :)
ငွေစန္ဒာ December 3, 2010 at 1:42 PM
ကျေးဇူးပါ Sunny ရေ
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး December 3, 2010 at 6:43 PM
ပုဇွန်ချဉ်လေး လုပ်ကြည့်ဦးမယ် မမငွေစန္ဒာရေ။ နည်းလေးပြောလို့ ကျေးဇူးနော်။
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး December 3, 2010 at 11:06 PM
မမငွေစန္ဒာရေ - နမ်အမှုန့်ထုပ်က ယိုးဒယားဈေးမှာပဲရတာလား။ SHENGSIONG မှာတော့ ရှာမတွေ့ဘူး။ တခြားဘယ်မှာ ရနိုင်သေးလဲ သိရင်ပြောပြပေးပါလား။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 16, 2010 at 3:58 AM
ပုဇွန်ချဉ်ရော ငါးချဉ်ရော သိပ်ကြိုက်တယ်...
ကြော်စားစား သုပ်စားစား အများကြီးစားဖြစ်တယ်..
၀ယ်စားတာထက် ခုလို ကိုယ်တိုင်လုပ်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်..
မင်္ဂလာပါ .... December 26, 2010 at 8:55 PM
ပုဇွန်ချဉ်ဆိုရင် အရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မှန်းလဲ မသိတော့ မြန်မာဆိုင်တွေကနေ တစ်ခါတစ်လေ မလတ်တာတွေပဲ ၀ယ်စားနေရတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ကြည့်သေးတယ် မလုပ်တတ်တော့ ပုပ်ကုန်လို့ ပစ်လိုက်ရတယ်လေး) အခုလို နည်းကောင်းလေးပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ် မရေ ... နောက်လဲ အမြဲလာလည်မယ်နော်
subuueain December 27, 2010 at 10:43 AM
ငွေစန္ဒာ December 27, 2010 at 2:36 PM
tn December 28, 2010 at 3:25 PM
ss February 21, 2011 at 7:33 AM
I tried making it today. but as I am alone and can't eat all for half kg, i made only 150g shrimp using one third of the powder with home salt. I haven't tried eating yet but it is winter and the room temperature is lower than fridge. so i put my box in the room with heater. now starts changing the color to pink.. i m so excited waiting it. thank you so much for sharing it!!!
စံပယ်ချို May 1, 2014 at 2:07 PM